Dahalo | mandimby maharo
Dahalo	Posted on 27 June 2012 by Mandimby Maharo	Ramenabila. Anarana hipetraka eo amin’ny tantaran’ny tetezamita izany. Anarana ho entin’ny olona amavoana ireo mpitandro filaminana manam-pahaizana maro mpandrave hetsi-bahoaka nefa tsy nahazo an’io dahalo io nandritry ny iray volana.
Raha ny resaka dahalo mpangalatra omby dia anisan’ny fanetribe ny firenena izy ireo. Mikaikaika tokpa mantsy ireo any ambanivohitra any noho ny afitsok’izy ireo. Very ny fananana nohariana amam’polo taona. Mety hanaraka hatramin’ny aina ary izany raha tsy mitandrina. Maro ihany moa no nitondra fanazavana momba io asan-dahalo io. Ao ireo milaza fa noho ny fanondranana omby velona ataon’ny fotondrana tetezamita amin’izao no nampirongatra io halatra io. Ao indray koa ny miteny fa efa fomban-drazana any atsimo any io manao dahalo io ka tsy hita izay hamongorana azy.
Fa na ilay hevitra voalohany na ilay faharoa dia tsy misy afaka hanamarina fa mety ny mamono ireo tompon-omby.
Ny zavamisy kpoa nefa dia toa ireo dahalo mpangalatra omby ihany no tena anaovana fihetsiketsehana fa ireo lazana fa dahalo ambony latabatra tsy dia misy sahy miresaka loatra. Matoa tsy hita I Ramenabila dia misy mpiaro sy mpanafina izy izay. Matoa misy mpangalatra omby ho aondrana dia misy ny mpividy izany. Ary matoa tsy mety miova ilay fomba izay hita ny tsy dia mahatsara azy dia misy mpampihatra izany.
Ireo dahalo ambony letabatra ireo izay tsy vitan’ny mangalatra omby fotsiny ihany fa izay rehetra hitany ka azony alaina dia raofiny avokoa: volamena, vatosoa, hazo sarobidy, hatramin’ny vakoka sy harentsaina maro isan-karazany aza. Ary tsy vita n y hoe ireo mpiompy omby irery ihany no lasibetry ny asa ratsiny fa ny firenena iray manontolo mihintsy. Sa ve efa lasa fomba fanao eto madagasikara koa ny manao dahalo ambony latabatra ka tsy tokony atao hahataitra intsony.
One thought on “Dahalo”	Pingback: Manao be midina… « mandimby maharo Leave a Reply Cancel reply	Enter your comment here...